Hebrio 12 - Ny Baiboly
Hebrio toko 12
Ny faharetana - Ny fizahan'Andriamanitra toetra antsika - Fihavanana - Fahamarinana - Fanekena ny Kristy.
1Koa amin'izany, noho isika voahodidin'ny vavolombelona zavon-tany toy izany, dia aoka koa isika hanesotra ny zavatra rehetra mitambesatra amintsika, sy ny fahotana izay manarona antsika, ary hihazakazaka amim-paharetana amin'izao fifanalana hazakazaka naroso hataontsika izao, 2mibanjina an'i Jesoa filohany sy mpanefa an-davany sy an-tsakany ny finoana, izay nahazo nifidy ny hafaliana natao teo anoloany, nefa naleony niaritra ny hazo fijaliana, sy tsy nitandro henatra koa; ary efa mipetraka eo an-kavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. 3Hevero fa niaritra ny famelezana mafy nafitsoky ny mpanota taminy izy, mba tsy ho ketraky ny fanarian-toky hianareo.
4Hianareo tsy mbola niady nanohitra ny ota hatramin'ny fahalatsahan'ny ranareo, 5ary efa hadinonareo ny fananarana milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe: Anaka, aza mba ketraka amin'ny fananarany anao; 6fa izay tian'ny Tompo no faiziny, ary izay rehetra raisiny ho zanaka no kapohiny. 7Fampianarana ho anareo ny fikapohany; fa toy ny zanaka no itondran'Andriamanitra anareo, ka iza no zanaka tsy faizin'ny rainy? 8Raha tsy faizina toy ny zanaka rehetra hianareo, dia tsy mba zanaka fa zaza sary. 9Ary na ny raintsika ara-batana aza nohajaintsika na dia nikapoka antsika aza; vao mainka ny Raintsika ara-panahy no tsy maintsy ekentsika mba ho velona isika. 10Izy ireo aloha dia manafay antsika andro vitsivitsy ihany, araka ny sitra-pony; fa Andriamanitra kosa manao izany araka izay hahatonga antsika hiombona amin'ny fahamasinany. 11Marina fa mampahory amin'ny andro anaovana azy ny famaizana rehetra, fa tsy mba mahafaly; nefa any aoriana kosa, dia hahavokatra fahamarinana amam-piadanana ho an'izay nandray azy izy. 12Koa henjano ny tànana miraviravy sy ny lohalika miketraka; 13ary ahitsio ny dian'ny tongotrareo, mba tsy hibirioka ny mandringa, fa hijoro mahitsy tsara.
14Mitadiava fihavanana amin'ny olona rehetra, ary mikatsaha fahamasinana, fa izay tsy manana azy dia tsy mba hahita ny Tompo. 15Tandremo fandrao misy manary ny fahasoavan'Andriamanitra; aza avela hisy faka mangidy maniry, sao manakorontana sy mandoto ny maro. 16Aoka tsy hisy mpijangajanga aminareo, na mpanazimba ny zavatra masina tahaka an'i Esao, izay nivarotra ny fizokiany hahazoany hanina indraim-bava. 17Fa fantatrareo ny nanariana azy taty aoriana, nony naniry hahazo ny tso-drano izy; fa tsy azony nahodina intsony izay natao, na dia nangataka tamin-dranomaso aza izy.
18Hianareo tsy mba nanatona zavatra azo tsapaina sy mirehitra afo, sy izay rahona sy aizim-be sy kotro-baratra, 19ary feon-trompetra sy feo niteny mafy tsy tantin'ireo nandre, ka nangataka tsy handre izany intsony izy ireo; 20fa tsy tohany ilay fandrahonana hoe: Na biby aza mikasika ny tendrombohitra dia hotoraham-bato. 21Loza loatra no niseho tamin'izay, ka Moizy avy no vaky hoe: Tsiravina sy rano an-dravina aho! 22Fa ny nohatoninareo, dia ny tendrombohitr'i Siona tanànan'Andriamanitra velona, izay Jerosalema any an-danitra, sy ny fivorian'ny anjely alinalina, 23ny fiangonan'ny zokinareo izay voasoratra any an-danitra, ny Mpitsara izay Andriamanitry ny olon-drehetra, ny fanahin'ny olo-marina efa amin'ny fanaperana, 24sy Jesoa mpanalalana amin'ny fanekena vaovao, ary ny ran'ny famafazana izay miteny tsaratsara kokoa noho ny an'i Abela.
25Tandremo fandrao mandà izay miteny hianareo; fa na ry zareo nandà izay niteny teto an-tany aza tsy afa-nandositra, ka mainka isika raha mandà ilay miteny amintsika avy any an-danitra, 26dia ilay nanonzongozona ny tany fahizany tamin'ny feony, sy manome teny indray ankehitriny manao hoe: Indro hozongozoniko indray maka koa, tsy ny tany ihany, fa ny lanitra koa. 27Ny teny hoe indray maka koa milaza fa ny zavatra hozongozonina dia hovàna araka ny fomban-javatra natao, mba haharetan'izay zavatra tsy hozongozonina. 28Ary noho isika mandray fanjakana tsy azo hozongozonina, dia tano mafy ny fahasoavana, hoentintsika manao fanompoam-pivavahana ankasitrahan'Andriamanitra amim-panajana sy fahatahorana azy. 29Fa ny Andriamanitsika dia afo mandevona koa. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0587 seconds